Dadka Ma Dhiirigalisaa? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Dhiirigalinta waa dhaqaajiyaha maskaxada Aadanaha waxa ayna tamar xooggan siisaa maskaxda. Waxa ayna badashaa nolosha qofka sidoo kale waxay qeyb lixaad leh ka qaaddataa guusha qofka.
Waxaa loo qeybiyaa dhiirigalinta labbo qeybood oo kale ah:
1- Dhiirigalin adiga kaa imaaday oo gudahaada ka imaaneyso, waxaa kamid hadafyadda nolosha .Tusaalle waxa aad rabtaa in aad noqoto Xaafidul Qur’aan mar waliba oo uu Qur’aanka kugu adkaado waxa aad xasuusaneysaa hadafkaadi ahaa in aad noqoto Xaafidul Qur’aan.
2- Dhiirigalin ka imaaday dadka waxa ay noqon kartaa dhirigalitaan hadal ama lacag ka imaaday Waalid, Walaal ama Asxaab. Tusaalle marka aad dhammeyso waxbarshada in uu waalidka ku dhaho waan kugu ogaa kartidaas waxa aad tahay halyey Hooyo/ Aabe waan kugu faanaa Horey u soco iyo wixii lamid ah. Ama lagu dhiirigaliyo mobile qaali ah in lagu gado, dalxiis in laguu kexeeyo iyo wixii lamid ah.
Dhiirigalinta waxa ay kamid tahay furaha ugu muhiinsan ee guusha , waxa ay xoojisaa shaqada maskaxda, waxayna kor u qaaddaa kalsoonida ruuxa ku beeran. Waxa ay siisaa farxad qofka la dhiirigaliyey. Waxaa wanaagsan marka ay ilamahaada wax fiican sameyaan in aad ku dhiirigaliso sida marka uu soomo ayagoo yar in aad ku abaal mariso kuna dhiirigaliso waxa wanaagsan uu samayey.
Waxaa wanaagsan in aad noqoto mar waliba qof aan dadka niyad jabin marka uu walaalkaa/walashaa ah kuu soo bandhigo arimo uu rabo in uu qabto mustaqbalka dhow, Tusaalle: Haddii uu qofka ku dhaho ganacsi cusub ayaan billaabi rabaa,ama waxa aan rabaa in aan noqdo caalim ku taqasuusay cilmiga badmaaxa.
Kawaran haddii aad dhahdo faa’iido malaha ganacsi xilligaan billow ah ! Ama badmaax dalka uma baahnno iyo wixii lamidka ah.
Hadda ka hor ayaa waxaa jirey wiil aad u dadaal badnaa wiilkii waxa uu keeni jirey darajo wanaagsan illaa ugu danbeyntii uu gallay kaallinta koobaad ee jaamacadiisa waxa uu wacay Aabihii asago oo aad u faraxsan waxa uu rabay in uu lawadaago farxadda guushiisa laakiin Aabihii waxa uu ku yiri “ Waan mashquulsanahay hadda”. Hadalkaas waxa uu wiilkiisa ku reebay dhaawac aad u weyn illaa uu ugu danbeyn wiilkii uu ka haray waxbarashadii.
Ha u oggalaan hadaladaada in ay noqdaan kuwa dhaawaca qalbiyada Aadanaha, waxaa wanaagsan in aan aad u illaalinno hadaladda aan ku dhaheyno ilmaheenna.
Waxaa kamid ah hadalada dadka lagu dhiirigaliyo: Waad sameyn kartaa haa waad guuleysan kartaa gar baad u leedahay guusha, Waan ku kalsoonahay gaariga aad wado, waxa aad tahay darawal qabiir u ah wadida gaawaridda iyo wixii lamid ah.
Mar waliba Dhiiranow oo dhiirigali dadka.
Tags: Dadka ma dhiirigalisaa?
Next post DNA Lagu Ogaaday in Gabadhan ay Nooleyd 6,000 oo Sano Ka Hor
Previous post Maxaa Siyaadiyo Farxadda Aadanaha?